ubuntu-mm – Ck4Ubuntu
April 20, 2014 chitkoko	Leaveacomment Installaltion, Ubuntu mobile, Ubuntu Tablet
အောက်ဖော်ပြပါ devices များသည် Ubuntu touch တင်ရန်အတွက် Target devices များဖြစ်ပါသည်။
သင် android OS ပြန်လည်တင်လိုပါက ပြန်လည် ရယူရမည့် android images များဖြစ်ပါသည်။
Device Android Drivers Android Images Status
Nexus4mako occam Active development
Nexus 10 manta mantaray Active development
Nexus72013 WiFi flo razor Active development
Galaxy Nexus maguro takju or yakju Maintenance
Nexus7grouper nakasi or nakasig Deprecated
STEP 1. Flash the devices
သင်၏ ကွန်ပျူတာ နှင့် သင် ၏ devices တို့ချိတ်ဆက် နိုင်ရန် အတွက် သင်၏ Ubuntu OS တွင် အောက်ဖော်ပြပါ Tools PPA ကို ဦးစွာပထမ သွင်းပါ။
Terminal ( Ctrl +Alt+t ) ကို ဖွင့်၍ အောက်ဖော်ပြပါ command များကို copy & Paste လုပ်ပါ –
STEP 1.5 Android backup
သင် ၏ android devices ကို backup လုပ်ရန် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း android devices တွင် developer mode ရရန်
Settings -> About phone -> Build number (x7times)
build number ကို ၇ ကြိမ်နှိပ်ပါ ။
Settings -> Developer options -> USB debugging ကိုအမှန်ခြစ် ရွေးချယ်ပါ
သင် device ၏ Application များ ၊ OS နှင့် Data များကို သိမ်းဆည်းရန်အတွက်
သင်ပြန်၍ restore လိုပါက အောက်ပါ command ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
STEP 2. Device unlock
1. Device ကို power off ပိတ်ပါ ။ Power on ပြီး Power button + volume up + volume down ကိုနှိပ်ထားပါ။
2. သင်၏ device သည် bootloader အနေဖြင့် boot တက်ပါမည် ။
3. သင်၏ device ကို USB cable အသုံးပြု၍ computer ဖြင့် ချိတ်ပါ။
4. သင်၏ ကွန်ပျူတာတွင် Ctrl+Alt+t ကို နှိပ်၍ terminal ဖွင့်ပါ ။ sudo fastboot oem unlock ဟုရိုက်ပါ။
5. term of unlocking ကို သင်၏ device တွင် accept လုပ်ပါ။
6. Power button ကိုနှိပ်ပြီး boot ပြန်တက်ပါ က arrow မြှားအတိုင်း ဆက်လက် device reset လုပ်နိုင်ပါသည်။
သင်၏ Device နှင့် သက်ဆိုင် ရာ image file များကို UBUNTU SERVER မှ DOWNLOAD လုပ်ပါ ။
မှတ်ချက် ။ ။ Nexus7အတွက် grouper နှင့် သက်ဆိုင်ရာ file များကိုသာ download လုပ်ရမည်။
android fastboot tool ကို အသုံးပြု၍ bootloader ၊ recovery နှင့် system images တို့ကို အောက်ဖော်ပြပါ command အတိုင်း terminal မှ တဆင့် install ပြုလုပ်ပါ
ပြီးနောက် recovery mode သို့ ပြန်ဝင်ရန်
adb reboot -f recovery
ပြီးနောက် trusty-preinstalled-touch-armel+grouper.zip ကို sdcard အတွင်း သို့ adb push command သုံး၍ အောက်ပါ အတိုင်း autodeploy လုပ်နိုင်ပါသည်။
ပြီးနောက် trusty-preinstalled-touch-armhf.zip ကို sdcard အတွင်း သို့ adb push command သုံး၍ အောက်ပါ အတိုင်း autodeploy လုပ်နိုင်ပါသည်။
ပြီးနောက် သင် ၏ device သည် အလိုအလျှောက် boot ပြန်တက် ၍ Ubuntu Touch UI ကို အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက် ။ ။ အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ရှိပါက saintjohn769@ubuntu.com သို့ မေးမြန်းနိုင်ပါသည် ။
Tags: install, Ubuntu Phone Touch/install, Ubuntu Tablet, ubuntu-mm	|
December 6, 2013 chitkoko	2 Comments Installaltion, Software
http://www.vpnbook.com/freevpn သို့ သွားပါ ။ Bundle များကို download လုပ်ပါ ၊
user name နှင့် password တို့ကို ရေးမှတ်ထားပါ။ VPN bundle zip ဖိုင်ကို ဖြေပါ။
Terminal ကိုဖွင့်ပါ ။
download ပြုလုပ်ထားသော ်folder သို့ TERMINAL မှ အောက်ပါ အတိုင်းသွားပါ-
ထို့နောက် openvpn –config vpnbook-euro1-tcp443.ovpn ဟုရိုက်၍ …အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။၊
အသေးစိတ်သိရှိလိုပါက ….http://www.vpnbook.com/howto/ တွင် အသုံးပြုနည်းတို့ကိုလေ့လာဖတ်ရှုနိုင်သည် ။
Tags: openvpn, ubuntu-mm, VPNinubuntu	|
Easy Raspberry Pi Setup Guide for MYANMAR
August 20, 2013 chitkoko	3 Comments Community, Installaltion, My Story, Raspberry Pi
Raspberry Pi ဆိုသည်မှာ credit size သာသာရှိသော single board computer တစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျောင်းများတွင် computer science များ သင်ကြားရာတွင်ပိုမိုအထောက်အကူပြုနိုင်ရန်အတွက် UK ရှိ Raspberry Pi Foundation မှစတင်ခဲ့ ပါသည်၊စတင်ထုတ်လုပ်ပြီးနောက် ပိုမို အသုံးတည့် သဖြင့်သုံးစွဲသူများ စွာရှိခဲ့ပါ သည်။ထွက်ရှိခဲ့သော အမျိုးအစား နှစ်မျိုးမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-
Note, the Compute module column refers to the bare Compute module, not connected to any IO board.
BRCM2835 SoC Yes Yes Yes Yes Yes
Standard SoC Speed 700Mhz 700Mhz 700Mhz 700Mhz 700Mhz
RAM 256MB 512MB* 256MB 512MB 512MB
Storage Full SD Full SD Micro SD Micro SD 4GB eMMC
Ethernet 10/100 No Yes No Yes No
HDMI output port Yes Yes Yes Yes Yes
Composite video output Yes Yes On 3.5mm jack On 3.5mm jack Yes
Number of USB2.0 ports 12141
Expansion header 26 26 40 40 N/A
Number of available GPIO 17 17 26 26 48
3.5mm audio jack Yes Yes Audio/Video Audio/Video N/A
Number of camera interface ports (CSI-2) 1 1 1 1 2
Number of LCD display interface ports (DSI) 1 1 1 1 2
Power (bare, approx, 5v) 300mA, 1.5W 700mA, 3.5W 650mA, 3W
Size 85 x 56 x 15mm 85 x 56 x 17mm 65 x 56 x 12mm 85 x 56 x 17mm 62 x 30 x 3mm
Early Model B boards had 256MB RAM
credit to raspberrypi.org
သင်အသုံးပြုလိုသော　ဆက်စပ်သုံးပစ္စည်းများပေါ်မူတည်၍　Raspberry Pi ကို　တပ်ဆင်အသုံးပြု
Power (ပါဝါ)Raspberry Pi အတွက်　အသုံးပြုသော　power connector
(　ပါဝါကြိုး　)　သည်　smart phone စမတ်ဖုန်း　များတွင်　အသုံးများသော　micro USB power connector ကိုအသုံးပြုထားပါသည်။အသုံးပြုရမည့်　PSU (　power supply unit ) မှာ5V နှင့်700mA (0.7A) ခန့်　ရှိရမည်။　အသုံးများ　သော　PSU များတွင်　အထောက်အပံ့ပေးသော　mA တို့ကို　PSU unit တို့တွင်ရေးမှတ်ထားလေ့ရှိသည်။2000mA(2.0A) ထိအထောက်အပံ့ပေးသည်ကိုတွေ ့ရသည်။
Raspberry Pi တွင်ပါဝင်သော　USB ports များသည်　ပါဝါများများသုံးသော　devices များကို　အသုံးမပြုနိုင်ပဲ　၊　ပါဝါအစားနည်းသော　devices များ　(~100mA)　ကိုသာအသုံးပြုနိုင်မည်။ ထိုကြောင့်　အခြားဆက်စပ်　အသုံးပြုလိုသောအတွက်　လုံလောက်သော　power ကိုရရှိအသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်　raspberry pi ရှိ　USB port တွင်　ချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမည့်　USB HUB သည်သီးခြားပါဝါ　အသုံးပြုရန်　အတွက်　ညွှန်ကြားထားပါသည်　။ USB connector
Raspberry Pi ကို　တိုက်ရိုက်　control လုပ်ရမည့်　ဆက်စပ်ပစ္စည်းများမှာ　Mouse နှင့်　Keyboard တို့ဖြစ်ပါသည်။　ထိုကဲ့သို့အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက်　wireless စနစ်သုံး　သို့　standard USB mouse နှင့်　keyboard တို့ကိုအသုံးပြုရမည်။　PS2 mouse နှင့်　keyboard တို့ကိုအသုံးပြုမည်　ဆိုလျှင်　USB adapter ကြားခံပစ္စည်း လိုအပ် မည်ဖြစ်သည်　။
အကယ်၍　bluetooth စနစ်သုံး　mouse နှင့်　keyboard တို့ကိုအသုံးပြုမည်ဆိုပါက　အဆိုပါပစ္စည်းများကို　ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်ရန်　တန်ဖိုးနည်း　Bluetooth USB adapter လိုအပ်ပြီး　ချိတ်ဆက်သုံးစွဲနိုင်ရန်　setup ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Display ကိုအသုံးပြုရန် သင်အတွက်အဆင်ပြေနိုင်သော　ပစ္စည်း　(TV/LCD monitor )တို့ကိုသုံးနိုင်ပါသည်　။TVများတွင်　HDMI connection အပေါက်များ　နှင့်　အသစ်ထွက်　LCD Monitor များတွင် DVI connection အပေါက်များ　ပါရှိပြီး　HDMI to DVI adaptor ကိုသင်သုံးစွဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။
HDMI to DVI Adaptor / Cables ရွေးချယ်လျှင်သတိထားရမည့်အချက်မှာ-
photo credit to Networktechinc
DVI ports များစွာရှိသည့်အထဲတွင်　ပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်　DVI-D type(　အမှန်ခြစ်　)　သည်　monitor များစွာတွင်အထောက်အပံ့ပေးသည်။အပေါက်လေးပေါက်ပါ　DVI-A/DVI-I type ( အမှားခြစ်)ကိုမူ　ယင်း　type ကိုအထောက်အပံ့ပေးသော　monitor တို့တွင်သာအသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Tip : ဆက်စပ်သုံးစွဲမည့်　ပစ္စည်းများကိုRaspberry Pi နှင့်　connection သေချာချိတ်ဆက်ပြီးမှpower on　ပါ။သင်အသုံးပြုမည့်　Display နှင့်SDcard တို့အား　ချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုဖြုတ်လိုသည့်　အခါတိုင်း　power ကိုဦးစွာ　ပိတ်ပြီးမှ　ပြုလုပ်ပါရန်　ညွှန်ကြားပါသည်။
HDMI to VGAကို အသုံးပြုလိုပါက　အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။　များသောအားဖြင့်ယင်းကြိုးတို့သည်　ဈေးကြီးပါသည်　။　A passive HDMI/DVI to VGA adapter သည်　Raspberry Pi တွင်အလုပ်မ　လုပ်ခြင်းမှာ　လိုအပ်သော Analogue signals များကို　Raspberry Pi မှ　generated မလုပ်နိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
Analogue RCA output သည်　TV အဟောင်းများ　၊　screen အသေးများနှင့်　video capture devicesများကိုချိတ်ဆက်　အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။　အခြေခံအသုံးပြုမည့်သူများအတွက်　640*480 resolution သည်　သင့်တော်ပါသည်။ကြိုးနှစ်မျိုးလုံးကိုချိတ်ဆက်ထားပါ RaspberryPi မှ HDMI ကို　default အဖြစ်သာရွေး　ချယ်ပါမည်။
အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်း　တစ်ခုအနေဖြင့်　Internet Connectionချိတ်ဆက်လိုလျှင်　RJ45 network ကြိုး　ဖြင့်　သင်၏　router သို့　modem အား　ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး　USB Wifi dongle အသုံးပြု၍　Wifi connection ကိုချိတ်ဆက်လိုပါကလည်း　setup ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်သည်။
Basic Equipment ( အခြေခံလိုအပ်သောပစ္စည်းများ)
၁။　Micro USB Charger ( အနည်းဆုံးပါဝါ　လိုအပ်ချက်　5V 700mA ) နှင့်　micro USB cable တို့လိုအပ်ပါသည်။
၂။　SD Card ( 2Gb အထက် မှ SDHC 32Gb )　Class4recommand နှင့်　card reader
၃။　Display အတွက်သင်အသုံးပြုလိုသောစက်အတွက်　cable သို့　HDMI Cable
၄။　Mouse နှင့်　Keyboard ( wireless or wired )
၅။　ပါဝါသီးသန့်ပေး၍ရသောUSB HUB ( USB devices များကို　အမြင့်ဆုံးပါဝါ　ပေးနိုင်သည်ကိုညွှန်ကြားသည်။)
၆။　Network Cable နှင့် အသံအတွက်　audio ကြိုး
Recommended Hardware များကိုအောက်ဖော်ပြပါ　site တွင်　ကြည့်နိုင်ပါသည်။
A . Power : Micro USB Charger
B. SD Card : Standard Size SD Card
C. HDMI : Connected to HD TV HDMI input for 1080p & digital audio
D. LAN : Wire connection to network hub/ Switch
E. USB : Wirelwss RF Dongle for Mouse and Keyboard
B. SD Card : Micro SD Card with Full Size Adapter
C. HDMI : Connected to HDMI to DVI-D adaptor, then into momitor DVI input for 1080p (no audio)
E. USB : USB Mouse and USB Keyboard
F. Audio : 3.5mm Audio out to speakers/ headphones
Video Out Setup
A . Power : Micro USB Charger / High Capacity Mobile Battery (rated output at 5V 700mA or more )
C. RCA Video : Connected to connected toeither TV In/SCart adaptor (European-TV connection )/ USB Video Capture Device
E. USB : USB Mouse and USB Keyboard or Bluetooth/Wirelwss RF Dongle for Mouse and Keyboard
Raspberry Pi website မှ　download ပြုလုပ်ပါက　-
http://www.raspberrypi.org/downloads　Download စာမျက်နှာ　တွင်သင်အသုံးပြုလို၍　download လုပ်ထားသော　(　OS file size )　OSဖိုင်ဆိုဒ် ပြည့်ခြင်း　၊　ပျက်စီးမှုရှိ–မရှိ　စစ်ဆေးရန်　(using SHA-1 checksums)　ကိုအသုံးပြုရန်　တိုက်တွန်း　ညွှန်ပြထားပါသည်။
သင်အသုံးပြုလို၍　download လုပ်ထားသော　OS အတွက်　user　name နှင့်password တို့ကိုပါ　ရေးမှတ်ထားသင့်ပါသည်။
မှတ်ချက်　။　။　သင်လိုအပ်သည်မှာ-
SDCard 2Gb သို့　2Gb ထက်ပိုသော　(　သင်အသုံးပြုလိုသော　OS နှင့်　အခြားလိုအပ်ချက်များ)
Linux/ Windows အသုံးပြုနိုင်သော　ကွန်ပျူတာမှလည်း SD card သို့ မိမိအသုံးပြုလိုသော operating system ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ instructions သည် debian6-19-04-2012.zip ကို ပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
SD card setup with Windows ( Windows မှ SD ကဒ်အတွင်းသို့ ရေးထည့်ခြင်း )
(၁) ဦးစွာပထမ operating system zip ဖိုင်ကို download ပြုလုပ်ပါ ။
(၂) ပြီးနောက် zip file ကို ဖြေပါ။ tar/bz2 ဖိုင်ဖြေရန်အတွက် Pea Zip ကို www.peazip.com တွင်ရယူအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
(၃) extract ပြုလုပ်ပြီးနောက် .img (2Gb) ပမာဏရှိသော ဖိုင်ကို ရရှိမည်။
(၄) .img ဖိုင် ကို SD card အတွင်းထည့်သွင်းနိုင်ရန်အတွက် Window32DiskImager ကိုhttp://www.raspberrypi.org/downloads သို့
(၅) မှတ်ချက် ။ အခြား sd card များ ၊memory stick များကို ဖြုတ်ထားပါ။မှားယွင်း၍ format ရိုက် မိမည့်အတွက်ဖြစ်ပါသည်။
သင်၏ sd card ကို card reader အတွင်းသို့ထည့်ပြီးနောက်
သင်extract ပြုလုပ်ထားသော .img ဖိုင်ကိုရွေး၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
သင်ထည့်သွင်းလိုသော sd card ၏ Drive letter ကိုရွေးပါ ။အဆိုပါ လုပ်ဆောင်ချက် သည် သင်၏ sd card ရှိ data များအားဖျက်လိုက်မည် ဖြစ်သည်။
write ကိုနှိပ်ပြီးနောက်သင်၏ sd card အတွင်း program မှ OS ကို ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Writing an SD card from OSX (MAC OSX မှ SD ကဒ်အတွင်းသို့ ရေးထည့်ခြင်း )
SD card Set up from MAC
၁။Terminal Utility ကို/Applications/Utilities တို့မှတဆင့် ဝင်ရောက်
၍ command line prompt အသုံးပြုရန်အတွက် ဖွင့်ပါ ။
၂။ သင်၏ SD card ကို ကွန်ပျူတာအတွင်းသို့ မထည့် ထားပဲ CLI တွင် df -h ဟုရိုက်ပါက df program မှ သင့်ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ Harddisk volumes နှင့် free space ပမာဏ တို့ကိုသေချာစွာ ရေးမှတ်ထားပါ။
၃။ ယခု SD card ကို ထည့်ပြီးနောက် df -h ဟုထပ်မံရိုက်ပါ ။
၄။ ယခင် SD card မထည့်မှီ နှင့် ထည့်ပြီးနောက် ဖော်ပြသော ကွာခြားချက်တို့ကို စစ်ဆေးပြီးနောက် သင် SD card ၏ ပမာဏ နှင့် အမည် တို့ကို သင်တွေ့ရမည်။ ဥပမာ – /Volumes/Untitled အနေဖြင့် mount နေပြီး ၊ device ၏အမည်ကို /dev/disk3s1ဟု သင်မြင်ရမည်။သင့် SD card အမည်နှင့် volume တို့ကို ရေးမှတ်ထားပါ။
၅။SD card အတွင်း OS ထည့်သွင်းခြင်းမပြုမှီ unmount ပြန်လုပ်ရမည် ။unmount ပြုလုပ်ရန် အတွက် –
(မှတ်ချက်။ ။ /dev/disk3s1 နေရာတွင် သင်ခုနကရေးမှတ်ထားသော သင့် SD card ၏ အမည်ကို ရေးပါ။) အထက်ပါ command line သို့ Disk Utility ကိုအသုံးပြု၍ လည်း သင် unmount ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၆။ /dev/disk3s1 နေရာတွင် /dev/rdisk3 ဟုအမည်ပြောင်းပါ ။ယခုလိုအမည်ပြောင်းရာတွင် အရေးအကြီးဆုံး မှာ SD card အမည် ကိုသေချာစွာ df -h ဟုထပ်မံရိုက် စစ်ဆေးပြီးမှသာပြုလုပ် သင့်ပါသည်။*****သင်မှားယွင်း၍ သင်၏ hard drive ကို ပြုလုပ်မိပါက data များပျောက် ဆုံးနိုင်ပါသည်။*****
၇။ သင့်ကွန်ပျူတာ၏ home directory အတွင်း သို့ image file ကိုထားပါ။ သင်ယခု Unix utility တစ်ခုဖြစ်သော dd command ကိုအသုံးပြု၍ .img ဖိုင်ကို SD card အတွင်းသို့ကူးထည့်မည်။
အောက်ဖော်ပြပါ command ကိုသုံးပါမည်။
sudo dd bs=1m if=~/2013-09-18-wheezy-raspbian.img of=/dev/rdisk3
sudo = Super User Do as root user
dd = Unix utility command
bs=1m = ကူးယူမည့်နှုန်း 1m သည် 1MB ကို ရည်ညွှန်းသည်
if=~/2013-09-18-wheezy-raspbian.img = input file source
of=/dev/rdisk3 = output file source
၈။ image ဖိုင်ကူးယူရန်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာပါမည်။ ကူးရေးပြီးနောက် status ပြပြီးနောက်သင့် SD card ကို စတင်၍ Raspberry Pi တွင်တပ်ဆင်၍ အသုံးပြုနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Writing an SD card from Linux ( Linux မှ SD ကဒ်အတွင်းသို့ ရေးထည့်ခြင်း )
၁။Terminal Utility ကို/Applications/Utilitiesတို့မှတဆင့် ဝင်ရောက်
၍ command line prompt အသုံးပြုရန်အတွက် ဖွင့်ပါ ။(Ctrl+Alt+T)
၂။ သင်၏ SD card ကို ကွန်ပျူတာအတွင်းသို့ မထည့် ထားပဲ CLI တွင် df -hဟုရိုက်ပါက df program မှ သင့်ကွန်ပျူတာအတွင်းရှိ Harddisk volumes နှင့် free space ပမာဏ တို့ကိုသေချာစွာ ရေးမှတ်ထားပါ။
၄။ ယခင် SD card မထည့်မှီ နှင့် ထည့်ပြီးနောက် ဖော်ပြသော ကွာခြားချက်တို့ကို စစ်ဆေးပြီးနောက် သင် SD card ၏ ပမာဏ နှင့် အမည် တို့ကို သင်တွေ့ရမည်။ ဥပမာ – /media/DATA အနေဖြင့် mount နေပြီး ၊ device ၏အမည်ကို /dev/sdb1ဟု သင်မြင်ရမည်။သင့် SD card အမည်နှင့် volume တို့ကို ရေးမှတ်ထားပါ။
(မှတ်ချက်။ ။ /dev/sdb1 နေရာတွင် သင်ခုနကရေးမှတ်ထားသော သင့် SD card ၏ အမည်ကို ရေးပါ။) အထက်ပါ command line သို့ Disk Utility ကိုအသုံးပြု၍ လည်း သင် unmount ပြုလုပ်နိုင်သည်။
၆။သေချာစွာ df -h ဟုထပ်မံရိုက် စစ်ဆေးပြီးမှသာပြုလုပ် သင့်ပါသည်။*****သင်မှားယွင်း၍ သင်၏ hard drive ကို ပြုလုပ်မိပါက data များပျောက် ဆုံးနိုင်ပါသည်။*****
sudo dd bs=1m if=~/2013-09-18-wheezy-raspbian.img of=/dev/sdb
Ubuntu OS အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ImageWriter အမည်ဖြင့် Ubuntu Software Center တွင်ရှာဖွေ ထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
let me introduce my Pi Testing at Home video
http://chitkoko.ubuntu-mm.net , www.chitkokowin.com
Tags: Pi4apps, PiSetup, RaspberryPi, RPI, Software, Ubuntu Myanmar Lo Co Team, ubuntu-mm	|
Ubuntu-MM1212 (2nd class )29-30.12.12
December 29, 2012 chitkoko	2 Comments Uncategorized
Hello Ubuntu attendances
First ,I’d like to thanks to all of the attendances of today event. And something is comfortable ,it’s all our fault and we ‘ll make more best in nest time. Our Team leader ,He can speech2and half hours until event was finish.
P.s …Special thanks to Zaw Min Aung who help to live video steaming the event and thanks Ethan who taking photos for us .and all of my Co member….
Tags: events, ubuntu myanmar loco team, ubuntu-mm	|